Soo Iibso Wireless-ka ABS Physiotherapy Korantada EMS Cagta Massager - Rar bilaash ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
Wireless ABS Physiotherapy Korontada EMS Foot Massager
maraakiibta From Shiinaha United States Boqortooyada Ingiriiska Australia France Italy Czech Republic Poland SPAIN
Shiinaha United States Boqortooyada Ingiriiska Australia France Italy Czech Republic Poland SPAIN
Wireless ABS Physiotherapy Korontada EMS Foot Massager - Shiinaha gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nooca Shayga: Duugista & Nasashada
Waxyaabaha: Qalabka isku dhafan
Nambarka Tusaalaha: A10979
Size: 31 * 31cm
Magaca: EMS Foot Massager
Waxaa ku shaqeynaya: 2 * AAA batari (Kuma jiraan)
Muuqaal: Wuxuu kobciyaa wareegga dhiigga, wuxuu dejiyaa cagaha
Waxay dhiirrigelisaa wareegga dhiigga oo waxay dejisaa cagaha.
Joodar jilicsan oo raaxo leh qalab cagtiisa.
Daabacaadda wareegga wareegga wareegga ion qalin
Qeyb weyn oo gooni ah, sagxadda sagxadda waxaa lagu nadiifin karaa maro qoyan.
Sariirta cagtu waxay ka samaysan tahay qalab jilicsan oo jilicsan oo PU ah, adkeysigiisuna waa mid aad u fiican. Iyo sababta oo ah waxay isticmaashaa qalab wax lagu tababaro oo tayo sare leh, salka cagtu waa la laaban karaa oo la qaadi karaa.
Badeecadani ma aha mid biyuhu xireen, sidaa darteed ha ku taaban sheyga gacmo qoyan, ha ku dhaqin biyo, ama ha ku daadin dareeraha.
Nadiifi cagaha kuna tirtir maro qalalan kahor isticmaalka.
Ha u isticmaalin qaboojinta ama diirimaadka maadaama ay jirto khatar u nuglaanta. Sidoo kale, ha u isticmaalin badeecadan biyo karkaraya ama isbeddel heerkul lama filaan ah oo ku dhaca badeecadan.
Ha isticmaalin haddii aad wadne xanuun qabto ama aad uur leedahay
Ha u isticmaalin iskudarka alaabada kale ee korantada ama aaladaha quruxda badan. Waxay sababi kartaa dhibaatooyin caafimaad.
1 x suufka duugista
1 x Maamulaha guud
1 X Buugga isticmaalaha
Ku buuxi sanduuqa tafaariiqda
vvv wanaagsan & heshiis weyn
SIDA LOO SHIFAY. GAADIID DEG DEG AH UK. MAHADSANID.
tayo aad u wanaagsan
Kuwa shaqo ku leh cagtooda duugistani waa uun helitaan) Ka imaadka shaqada wuu ku nasin doonaa oo wuxuu ku farxi doonaa lugahaaga) Massage-ku wuxuu ku yimaadaa sanduuq fimenical ah. Gudaha waxaa ku jira maro cag ah iyo qayb xakamaynta masaajidada + tilmaamida) Si shiraac loogu xiro qaybta xakamaynta iyadoo la kaashanayo rivets) wax walba way fududaan) duugista ayaa diyaar u ah inay shaqeyso) Waxay ka shaqeysaa 2 baytariyada AAA. Way ku filan yihiin in la isticmaalo muddo dheer) Massage ma gariirayo. Kicin-kicintu waxay ka timaaddaa garaaca korantada (dareenka garaacaya hadda)) Waxaa jira 6 qaab oo hawlgal ah. Laga soo bilaabo tan ugu daciifsan ilaa kicinta aadka u xoogan) Waxaan isticmaalaa 1 ama 2 awood) in badan aniga durba wax badan) Dareemo qabow) Waxaan u isticmaalaa 10-15 daqiiqo waana igu filan tahay in lugaha ay degi doonaan) Raadi waxaad u baahan tahay) Massage-ka waxaa lagu fuliyaa tayo ahaan. Shaqada ma jiraan wax cabashooyin ah, wax waliba si cad ayey u shaqeeyaan) Sariirtu ma qoyn karto oo maydhi karto!) Ubadka RB 3 toddobaad)